Madaxwayne Farmaajo oo magacaabay La Taliyaha dhaqaalaha iyo Maamulka - Hablaha Media Network
Madaxwayne Farmaajo oo magacaabay La Taliyaha dhaqaalaha iyo Maamulka
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta u magacaabay Amiin Axmed Sheekh C/raxmaan inuu noqdo La Taliyihiisa dhanka dhaqaalaha iyo maamulka.
Amiin Axmed oo ah nin saaxada siyaasadda ku soo dhex jiray tan iyo sanadkii 2000 waxa uu ku dhashay magaalada Baydhabo sanadkii 1962dii.
Dhanka Waxbarashada dugsi quraanka iyo Dugsiyada Hoose iyo Dhexe wuxuu ku qaatay isla magaalada Baydhaba intii uusan usoo wareegin Muqdisho oo uu kaga baxay Dugsiga Sare ee 15 May.
Shahaadada koowaad ee Jaamacadda wuxuu ka qaatay Jaamacaddii Umadda sanadkii 1986dii, Wuxuu ka shaqo bilaabay Wasaaradda Maaliyadda isaga oo ka noqday madaxa cashuuraha toosan ee degmada Xamarweyne sanadkii 1986dii ilaa 1988kii.
Mr Amiin ayaa waxaa uu sidoo kale soo noqday Madaxa qeybta statistics Wasaaradda Maaliyadda dhammaadkii 1988kii.
Waxaa uu ka mid noqday Baarlamaankii dowladdii lagu soo dhisay Carte ee dalka Jabuuti, wuxuu ahaa xildhibaan ka ahaa tan iyo sanadkii 2012.
Sidoo kale Waxaa uu mar noqday Wasiirka K/Xigeenka Wasaaradda Maaliyadda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd dabayaaqadii sanadkii 2007.